के परमेश्वरको उद्देश्य यही हो | बाइबलले सिकाउँछ
अखबार पढ्नुहोस्, टिभी हेर्नुहोस् वा रेडियो सुन्नुहोस्; अपराध, युद्ध र आतङ्कवादकै समाचार पाउनुहुनेछ! तपाईंका आफ्नै समस्याबारे विचार गर्नुहोस् त। रोगबिमार वा प्रियजनको मृत्युले गर्दा सायद एकदमै दुःखी हुनुहुन्छ होला। तपाईं अय्यूब नाम गरेको असल मानिसजस्तै महसुस गर्नुहुन्छ होला, जसले आफू “कष्टमा झुकेको” छु भने।—अय्यूब १०:१५.
म र सबै मानिसजातिको लागि के परमेश्वरको उद्देश्य यही हो?
म कसरी आफ्ना समस्याहरूको सामना गर्न सक्छु?
के पृथ्वीमा कुनै दिन शान्ति छाएको हेर्न पाइएला?
बाइबलले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन्छ।
परमेश्वरले पृथ्वीमा यस्ता परिवर्तन गर्नुहुनेछ भनी बाइबल सिकाउँछ।
“उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ।”—प्रकाश २१:४
“लङ्गडा मृगझैं उफ्रनेछ।”—यशैया ३५:६
“अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन्‌।”—यशैया ३५:५
‘चिहानमा हुनेहरू सबै निस्किआउनेछन्‌।’—यूहन्ना ५:२८, २९
“त्यहाँका बासिन्दाहरूले यसो भन्नेछैनन्‌, ‘म बिरामी परें।’”—यशैया ३३:२४
‘पृथ्वीमा प्रशस्त अन्न हुनेछ।’—भजन ७२:१६
बाइबलको शिक्षाबाट लाभ उठाउनुहोस्
अघिल्ला पानामा बताइएका कुराहरू अव्यावहारिक छन्‌ र ती काल्पनिक हुन्‌ भनेर नपन्छाउनुहोस्। परमेश्वरले ती कुराहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले ती प्रतिज्ञा कसरी पूरा गर्नुहुनेछ भनी बाइबल बताउँछ।
तर बाइबलले अरू थुप्रै कुरा पनि बताउँछ। तपाईं अहिले कसरी सुखी जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ भनी बाइबलमा बताइएको छ। एकछिन आफ्ना चिन्ता-फिक्रीबारे सोच्नुहोस् त। जस्तै: पैसाको अभाव, पारिवारिक समस्या, बिग्रँदो स्वास्थ्य वा प्रियजनको मृत्यु। यी समस्याको सामना गर्न बाइबलले तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ। साथै तल दिइएका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ पाएपछि तपाईंले ढुक्क महसुस गर्नुहुनेछ:
हामी किन दुःखकष्ट भोग्छौं?
हामी कसरी जीवनका फिक्रीहरूको सामना गर्न सक्छौं?
हामी आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई कसरी अझ सुखी बनाउन सक्छौं?
मरिसकेपछि हामीलाई के हुन्छ?
मरिसकेका प्रियजनहरूलाई के हामी फेरि भेट्न पाउनेछौं?
परमेश्वरले भविष्यको लागि गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुहुनेछ भनी हामी कसरी पक्का हुन सक्छौं?
तपाईंले यो किताब पढिरहेको कुराले नै तपाईं बाइबलले के सिकाउँछ भनी जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनी देखाउँछ। यस किताबले तपाईंलाई बाइबलको कुरा बुझ्न मदत गर्नेछ। सबै अध्यायमा प्रत्येक अनुच्छेदको लागि प्रश्नहरू दिइएका छन्‌। यहोवाका साक्षीहरूसित बाइबल अध्ययन गर्दा प्रश्न-उत्तर गरेर छलफल गर्ने तरिका थुप्रैले मन पराएका छन्‌। आशा छ, तपाईंलाई पनि यो तरिका रमाइलो लाग्नेछ। बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ भनी बुझ्दै जाँदा अपार आनन्द र सन्तुष्टि पाउनुहुनेछ। तपाईंको यस्तो प्रयासमा परमेश्वरले आशिष्‌ देऊन्‌।
बाइबलबारे केही कुरा थाह पाउनुहोस्
बाइबलमा जम्माजम्मी ६६ वटा किताब छन्‌। ती किताबहरूलाई अध्याय अनि पदहरूमा छुट्टयाइएको छ। यस सिकाउँछ किताबमा थुप्रै शास्त्रपद छन्‌। सुरुमा किताबको नाम, त्यसपछि अध्यायको सङ्ख्या र अन्तमा पदको सङ्ख्या लेखिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि, “२ तिमोथी ३:१६” भनेको तिमोथीको दोस्रो किताबको अध्याय ३ को पद १६ हो।
यस किताबमा दिइएका शास्त्रपदहरू बाइबलबाटै खोलेर हेर्ने गर्नुभयो भने तपाईंलाई बाइबल पल्टाउन सजिलो लाग्नेछ। अनि दिनदिनै बाइबल पढ्न थाल्नुभए कसो होला? दिनमा तीनदेखि पाँच अध्याय पढ्नुभयो भने तपाईंले एक वर्षमा पूरै बाइबल पढ्न सक्नुहुनेछ।
बाइबल अध्ययन कसरी गरिन्छ?
संसारभरि नै यहोवाका साक्षीहरू निश्शुल्क बाइबल अध्ययन गराउने व्यक्तिहरू भनेर चिनिन्छन्‌। यो काम कसरी गरिन्छ, थाह पाउनुहोस्।